Sida loo isticmaalo YouTube Video Editor in Edit Video on YouTube
Video tafatir sida caadiga ah u baahan yahay xaddi siman yahay aqoon farsamo iyo software xirfadeed. Laakiin YouTube ayaa soo bandhigay ay YouTube cusub Video Editor. Waa wax iska fudud xeelad marka loo eego barnaamijyada desktop tafatirka dhaqanka. Haddii aadan isku dayay editor YouTube ah, waxa la joogaa wakhtigii si aad u bilowdo. Waa sahlan tahay si ay u bartaan iyo hage hoos ku siin doonaa fikrad ah u sixiddiisa videos on YouTube.
Tallaabada 1. Hel helitaanka YouTube Video Editor
Gudaha gal si aad YouTube (ama Google) xisaabta. Si ay u helaan YouTube Video Editor, aad si toos ah u URL, taas oo u tegi kartaa http://www.youtube.com/editor . Ama guji "Upload"> "Edit" u Video Editor tab.
Tallaabada 2. darsada videos in waqtiga
Ka dib markii aad ku Tifaftiraha, oo dhan YouTube videos muuqan doonaa. Haddii aad rabto in aad ku darto clip ka balliga videos galay mashruuca, si fudud u jiidi gal waqtiga ama ku dhacay icon lagu daray ee geeska gacanta midigta sare ee clip kasta. Waxa kale oo aad ku dari kartaa wax YouTube videos in ay ahaayeen uploaded leh liisanka "Creative Commons". Si tan loo sameeyo, u tag tab CC ah, ka heli video ah oo jiidin waqtiga.
Tallaabada 3. Edit videos sida aad jeceshahay
Iyada oo video ah editor YouTube, waxaad si degdeg ah u xaliyo kartaa videos, ku dar track audio aad video, darto qoraalada, u isticmaalaan sida diirada kala duwan iyo in ka badan. Hoos waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan oo ku saabsan sida loo isticmaalo YouTube video Editor.
Iska yaree / video Split
Goobaha Change video
Ku dar filtarrada
Ku dar qoraalka si video
Ku dar kala guurka video
Si aad u jaray ama la kala video, dul istaagin clip bartilmaameedka oo ka dhacay icon maqas si ay u dhinto clip ku burburi ah. Waxa kale oo aad Kursor kara cidhifka aad video in waqtiga iyo jiidi riixo in ay soo gaabin ama jar aad video.
YouTube Video Editor sidoo kale waxay bixisaa "rajeenayo in Quick" shaqo oo sameeya falanqaynta deg deg ah ee video ah oo uga faaidaysan goobaha ay midabka, dhalaalka, iyo duwan si toos ah. Kaliya waa inaad ku labanlaabtaa karaa guji video in ay galaan "rajeenayo in Quick" tab iyo si fudud u beddeli dhalaalka oo ka duwan, ku dar mooshin gaabis ah oo saamayn zoom digsiga, iyo xasilinta, dhalato audio ama isku shaandheyn video.
Waxa kale oo aad ku dari kartaa cajiib video filtarrada bixiyo editor this by. Si ay u helaan hawsha, double guji video iyo baddal ah "Filter" tab.
Si aad ku dari qoraalka si video, tag "Text" tab, sax "Enable qoraalka" oo geli qoraalka si ay u column qoraalka. Markaas astaysto font, size, midabka, jagada qoraalka sida aad jeceshahay.
YouTube sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku bedelan baxay audio ka mid ka mid ah kuwan raadkaygay ay ruqsad. Si tan loo sameeyo, dib u interface ugu weyn ee editor tagaan oo guji tab ah Audio. Dooranaysaa hees maktabadda iyo sidoo kale waxa ay jiidin waqtiga soundtrack ama riix calaamada lagu daray in ay xaq u lahaanshaha kasta.
Fiiro Gaar ah: Waa inaad ogaataa in qaar ka mid ah waa heeso ku xiran yihiin heshiis liisan, taas oo macnaheedu yahay YouTube si toos ah dari doonaa xayeysiis in video clip ah. Soo socda kale oo gaaban waa inaadan la edit karaa wadada audio oo dhan. Haddii gabay waa ka sii dheer aad video ka badan, wax aad sameyn karto, laakiin ha u ciyaaro tan iyo bilowgii ilaa video istaago.
Haddii dhowr video clips ayaa lagu daray waqtiga, waxaad u baahan tahay kala guurka si ay u sameeyaan mashruuca oo dhan macaan. Si aad ku dari guurka, u tag tab-guurka iyo dooran 16 saamaynta guurka.
YouTube Video Editor waa u fududahay in la isticmaalo, laakiin waxa keliya oo ay siisaa qaar ka mid ah hawlaha tafatirka video aasaasiga ah iyo waa u fududahay in shil marka la file badan oo wax looga qabto. Haddii aad rabto in aad video xirfad dheeraad ah, isku day Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Tafatirka qalab desktop video Tani waxay kaa caawin karaan hawlo video tafatirka si fudud dhamaystiran. Hubi qaababka dheeraad ah waxaa ka mid ah halkan .
> Resource > Video > Sida loo Edit Video on YouTube